कोरोनाको माहामारीमा कीर्तिपुरमा भर्खरै भयो फेरि यस्तो तमासा - News36media
कोरोनाको माहामारीमा कीर्तिपुरमा भर्खरै भयो फेरि यस्तो तमासा
April 19, 2020 April 19, 2020 News36mediaLeaveaComment on कोरोनाको माहामारीमा कीर्तिपुरमा भर्खरै भयो फेरि यस्तो तमासा
कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम नियन्त्रण गर्न अहिले मुलुकमा लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। लकडाउन घोषणा गरेको आज २७ औं दिन हो।
लकडाउनका कारण निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिक, विद्यार्थी र विशेषगरी श्रमिक वर्ग धेरै प्रभावित बनेका छन्। कतिपय श्रमिक राजधानीबाट पैदल यात्रा तय गरेर गन्तव्यतर्फ गएका कारुणिक तस्वीर समाजिक संजालमा भाइरल भएका छन्।
उनीहरुलाई सरकारले न गन्तव्यसम्म पुर्याएको छ न राजधानीमै बाँच्न सक्ने गरी उचित राहत नै व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्ता विचल्ली परेका पैदलयात्रुलाई खानाको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याएका समाचार पनि आउन थालेका छन्।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नपाओस भनेर २५ जना भन्दा धेरै मानिस भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको छ, त्यसमा पनि समाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। अझ अहिले त मुलुक लकडाउनमा छ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले भने शनिबार कीर्तिपुरमा विद्यार्थीलाई राहत वितरण गर्ने नाममा तमासा गरेको छ।
शनिबार अनेरास्ववियूको आयोजनामा विद्यार्थीलाई राहत वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरको नेतृत्वमा राहत वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो, त्यहाँ सयौंको संख्यामा विद्यार्थी भेला भएका थिए।
सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै महरले गरेको राहत वितरणको सर्वत्र आलोचना भएको छ। जसका कारण अनेरास्ववियू भित्र समेत विवाद उत्पन्न भएको छ।
शनिबार २५ भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन र लकडाउनको उल्लघंन गर्दै अनेरास्ववियूका संयोजक महरले राहत वितरण गर्न थाले। विद्यार्थीको संख्या धेरै भएपछि राहत पनि पुगेन। त्यसपछि महर राहत वितरणस्थलबाट ‘गायव’ भएका थिए।
राहत लिन पुगेका विद्यार्थीले राहत नपाएपछि विद्यार्थीबीच विवाद र होहल्ल्लासमेत भएको थियो। संयोजक महरले आफूखुशी सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै संगठनभित्रै विवाद बढेको छ। अनेरास्ववियूका सहसंयोगक रञ्जित तामाङले अनेरास्ववियूको आयोजनामा कतै पनि राहत वितरण नभएको दाबी गरे।
उनले अनेरास्ववियू जिम्मेवार विद्यार्थी संगठन भएको उल्लेख गर्दै यस्तो संगठनले त्यस्तो गैर जिम्मेवार काम नगर्ने बताए।
‘अनेरास्ववियूले अहिले कतै पनि विद्यार्थी भेला पारेर राहत वितरण गर्ने काम गरेको छैन,’ तामाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘शनिबार कीर्तिपुरमा सरकारी निर्देशन र लकडाउन उल्लघंन गर्दै हाम्रो संगठनको नाम लिएर कसले राहत वितरण गर्यो हाम्रो पनि चासोको विषय हो।’
सहसंयोजक तामाङले शनिबार अखिलले राहत वितरण नगरेको अभिव्यक्ति दिएसँगै अनेरास्ववियूभित्रको विवाद सहतमा देखिएको छ। तामाङले अनेरास्ववियू जस्तो संगठनले यस्तो महामारीको बेला भद्रगोल बनाउने काम नगर्ने बताए।
संयोजकले नै गरेको रहेछ भने पनि संगठन सामुहिक नेतृत्वमा चलेको र एकजना व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने व्यवस्था नभएका कारण आगामी बैठकमा यो विषयमा छलफल हुने बताए। ‘अनेरास्ववियूमा टिम छ, सामूहिक पद्धतिमा संगठन चल्छ । यस्तो बेलामा राहत वितरणको नाममा भीडभाड गर्नु गलत हो,’ उनले भने।
अनेरास्ववियू भित्रको विवाद जे सुकै भएपनि राहत वितरणका नाममा कोरोना भाइरस फैसाउने छुट कसैलाई छैन। त्यसमाथि शनिबार वितरण गरिएको राहतको स्रोत के हो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
यस्तो राहत वितरण गर्ने ठाउँमा सामाजिक दूरी र मास्क नलाउनु झनै लापरवाही पूर्ण व्यवहार हो।
Post Views: 27,250
कोरोनाका कारण दश महिनाको बच्चा संक्रमित
कोरोनाबाट यूएईमा ७१ नेपाली संक्रमित, २ जनाको निधन
संसारलाई खुशीको खबर : कोरोना भाइरस ४ दिनमा नै निको हुने, अमेरिकामा बन्यो एन्टीबडी !!!
May 16, 2020 May 16, 2020 News36media
परश शाह पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको टिकटकमा भिडियो देखेर तिनछ’क्क परे, यस्तो लेख्दै फेसबुकमा सेयर गरे..
June 9, 2020 June 9, 2020 News36media
माया बसेपछि यस्तो सम्म हुने रैछ, ६५ बर्षका बाजेले १८ बर्षकी युवती सङ्ग बिहे गरे !
September 12, 2020 September 12, 2020 News36media
चार छोराछोरीलाइ लिएर खोलामा हाम फालिन आमा, सबैको मृत्यु
नेपाल घुम्न जानु हुदैन भन्दै नेपालकै यति सुन्दर बर्णन गरेर प्रचार गर्ने महिला पहिलोपटक मिडियामा, भन्छिन् “म नेपाली हो”(भिडियो)
आँखा चिलायो भन्दै अस्पताल पुगेका व्यक्तिको आँखामा जे भेटियो, डाक्टरनै परे चकित…